China EEC L2e Electric Cabin Car -X2 saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Yunlong
EEC L6e Gaari Xamuul Koronto ah...
Falsafada Hawlgalka: Baabuurta E-Baabuurta ee Yunlong, Korantada Noloshaada Eco!
Meelaynta: Wadista masaafo gaaban iyo safar maalinle ah.Waxay ku siinaysaa gaadiid dabacsan oo ku wareegi kara, taasoo ka dhigaysa nolol maalmeedkaaga mid aad u fudud.
Shuruudaha keenista:20-40 maalmood ka dib markii la helo deebaaji
Soodejinaya:4 cutub oo loogu talagalay 1*20'GP, 10 unug oo ah 1*40HQ
1. Battery:60V58AH Battery-Acid-Acid, Awood baytari oo wayn, masaafada adkaysiga 80km, fududahay in la safro.
2. Mooto:1500W-xawaare-xawaaraha sare, darawalka gadaal-wheel, sawiraya mabda'a xawaaraha kala duwan ee baabuurta, xawaaraha ugu badan wuxuu gaari karaa 45km / h, awood xoog leh iyo torque weyn, si weyn u hagaajiyay waxqabadka fuulitaanka.
3.Nidaamka biriiga:Afarta Taageer ee Biriiga iyo qufulka badbaadada waxay xaqiijiyaan inaanu gaadhigu simbiriirixan.Neefsashada shoogga Haydarooliga waxay si weyn u shaandheysaa godadka.
4. Nalalka LED:Nidaamka koontaroolka iftiinka buuxa iyo laydhka hore ee LED, oo ay ku rakiban yihiin calaamadaha leexashada, nalalka biriiga iyo muraayadaha dib u eegida, aad uga badbaado safarka habeenkii, dhalaal sare, iftiin fog, qurux badan, badbaadinta tamarta iyo badbaadinta tamarta dheeraadka ah.
5.Dashboard-ka qeexida sare, iftiin jilicsan iyo waxqabad xoog leh oo ka-hortagga faragelinta.Way fududahay in la arko macluumaadka sida xawaaraha iyo awoodda, hubi horumarka siman ee wadista.
6. Taayirada:Taayirada faakuumka ee dhumucsan oo balaadha waxay kordhiyaan isqabqabsiga iyo xajinta, taasoo si wayn u wanaajisa badbaadada iyo xasiloonida.
7, Daboolka caaga ah:Gudaha iyo dibadda gaariga oo dhan waxa ay ka samaysan yihiin kuwa aan ur lahayn oo tayo sare leh oo tayo sare leh oo ABS ah iyo balaastikada pp engineering, kuwaas oo ah ilaalinta deegaanka, badbaado iyo adag.
8. Kursiga:Maqaarku waa jilicsan yahay oo raaxo leh, xagasha dhabarka dambe waa la hagaajin karaa, naqshadeynta ergonomic waxay ka dhigaysaa fadhiga mid raaxo leh.
9. Gudaha:gudaha raaxo leh, qalabaysan multimedia, kululeeyaha iyo quful dhexe, daboolo baahiyahaaga kala duwan.
10, Albaabada & Daaqadaha:Albaabada korantada ee heerka gaadhiga iyo daaqadaha iyo saqafka sare ee qorraxdu waa kuwo raaxo leh oo habboon, kordhinta badbaadada iyo xidhitaanka baabuurka.
11, muraayada hore ee dabaysha:3C shahaado leh oo dhalaalaysan oo dahaaran · Hagaaji saamaynta aragga iyo waxqabadka badbaadada.
12, Multimedia:Ku qalabaysan MP3 iyo muuqaalo rogaal celin ah, kaas oo ka saaxiibtinimo badan oo fudud in lagu shaqeeyo.
13, Aluminium Wheels Hub:Kuleylka degdega ah, culeyska fudud, xoogga sare, ma laha qallafsanaan, ammaan badan.
14, Frame & Chassis:GB Standard Steel, oogada sare ee ka hoosaysa pickling&Photostating iyo daxalka u adkaysta si loo hubiyo dareenka wadida ugu fiican ee taagan oo adag.
Tilmaamaha Farsamada Alaabooyinka
Tilmaamaha Farsamada Heerka EEC L2e Homologation
Saldhigga giraangiraha (mm)
Nadiifinta Min. Dhulka (mm)
Charger 60V 5A
Hore: 135/70-R12 Gadaal: 135/70-R12
Aluminium Aloy Hub
Oo ay ku jiraan
Oo ay ku jiraan (hore iyo gadaal)
Laabi karo, oo leh nalal tilmaame
Hore: EEC L6e Koronto Cabin Car-Y4
Xiga: EEC L6e Baabuurka Xamuulka Korontada Y2-C
EEC L2e Koronto Cabin Car -Y3
EEC L1e Baaskiil Koronto
EEC L6e Koronto Cabin Car-Y4